Tigidhada Van Lake Express Iibso | RayHaber | raillynews
HomeVan Lake Express Ticket
TCDD iyo Liman-Is-Wadahadalka Wadahadalka ayaa bilowday
TCDD, Ururka Wershadaha culus ee Turkiga iyo Qeybta Adeegga Bulshada ee Shaqaalaha (TÜHİS) iyo Port-İş Union 28. Gorgortanka Wada-xaajoodka Muddada Wada-Xilliga Xilliga Xilliga XX, 03 May 2019 Maalinta Jimcaha, Xarunta TCDD [More ...]
Van Lake Iskele Beach ayaa dib loogu furi doonaa Dadweynaha!
Aagga lugta lugaynta, oo loo xiray lugeeyayaasha sababa la xiriira howlihii loo qabtay xarunta tareenka ee xeebta harada Lake Van, dib ayaa loo furi doonaa dadweynaha kadib markii howlaha fidinta aagga saadka iyo aag nasasho dheeraad ah la abuuri doono. [More ...]
Dalxiiska Dalxiiska ee Van!
East Express ilaa Kars, Van Lake Express ilaa Van waxay ahayd rajo. In kasta oo ay labada tareenba ku soo badanayeen dalxiiska, Kars ayaa qayb libaax ka qaatay weerarkan dalxiiska. Wuxuu ka codsaday Van Lake Express sababtuna tahay dhamaadka xariiqda Tatvan [More ...]
Northern Van Lake Railway Line waa shardi ah inuu kordhiyo soo jiidashada Van!
Eastern Express oo leh Kars, Van Lake Express oo ay weheliso Van dalxiis, gaar ahaan xilliga dalxiiska jiilaalka ayaa ah kan ugu xiisaha badan ee khadka tareenka ee Waqooyiga Van Lake ee Van ayaa loo keenay ajandaha mar labaad. Van Lake Express [More ...]
Hal sano oo dheeraad ah
Maareeyaha Guud ee TCDD İsa ApaydınBishii Janaayo, joornaalka Raillife ayaa daabacay maqaal cinwaan looga dhigay Kenya Intii Aad Ka Dambeyn Sanad Kale…. Waa tan maqaalka TCDD GUUDAL MANAGER APAYDIN ​​Sanadka Cusub, rajo cusub iyo [More ...]
Sanadkii la soo dhaafay 63 ogaaday Fatal Shil Tareen ee Turkey
shil tareen ayaa ka dhacay dalka Turkiga sanadihii la soo dhaafay 63 dad badan oo naftooda ku waayay ama ay ku dhaawacmeen. Shilalka kadib, dayaca ajendaha ayaa la daboolay. Tan iyo markii tareen 1945 ka dhacay Turkiga [More ...]
Sida Loo iibsado Tikidhada Lahaanshaha ee Van Express.
Iibso tikidhada Van Lake Express! Karsiyuhu waa meel caan ku ah safarka gaar ahaan xilliga qaboobaha. Muwaadiniintu tikidhada kama heli karaan East Express waxay raadinayaan qaabab kale. Lake Van ayaa ah kan ugu horreeya ee xulashooyinkaan. [More ...]
Tareenada ka soo jeeda Ottoman ilaa hada
In kasta oo ay jiraan dhibaatooyinka dhaqaale ee dagaalladii isdaba joogga ahaa, Boqortooyadii Cusmaaniyiinta ayaa muhiimad siisay mashaariicda tareenka. Xaqiiqdii, mashaariicda sida Marmaray ayaa loogu dhawaaqay markii ugu horreysay muddadan. Wuxuu sii waday sanadihii hore ee Jamhuuriyadda [More ...]
Marmaray's 5. 295 ayaa ka gudubtay Badhtamaha Sanadka
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Cahit Turhan, furitaanka Marmaray 5. iyo warshaddii 29 ee ay maamusho TCDD bishii Oktoobar 2013. [More ...]
Mashruuca tikidhada ee Sera Lake
Duqa magaalada Akçaabat Şefik Türkmen wuxuu qabtay shir jaraaid oo ku saabsan ”Mashruuca Dalxiiska Dalxiiska ee Lake Lake ee Akçaabat Xarunta Dhaqanka iyo Arimaha Bulshada ee Degmadda Akçaabat. Shir saxaafadeed ayaa lagu qabtay Trabzon iyo Akcaabat [More ...]